Q & A – စာမကျြနှာ6– Healthy Life Journal
နှပ်ညှစ်ရင်း နားပိတ်သွားတယ် . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. နှာရည်ယိုလို့ နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီး ညှစ်လိုက်တာ နားပိတ်သွားပါတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ A. ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ နှာရည်ညှစ်ရင် လူအများစုက နှာခေါင်းနှစ်ဖက်ကို စုံပိတ်ပြီး ညှစ်လေ့ရှိကြတယ်။ အဲဒါက...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူက ဆန်စားရမလား၊ ဂျုံစားရမလား
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေ ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားပေးသည်။ ၊—– Q. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တွေက ဆန်စားရမလား၊ ဂျုံစားရမလား။ ဆန်စားလို့ရရင် ထမင်းကို ဘယ်လိုချက်စားရမလဲ ဆရာ။ A. ဆန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးနေကျလူတွေက ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လို့ ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ပြောင်းလဲစားဖို့...